एक जुझारु निर्देशकको चिरफार - Naya Online
एक जुझारु निर्देशकको चिरफार
नयाँ अन्लाईन बिहिबार, फाल्गुन ३०, २०७५ (March 14th, 2019 at 7:12pm ) फिचर, ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
एकै वर्षको एकै याममा एकै निर्देशकको दुई चलचित्र विरलै प्रदर्शनमा आउँछन् । किनभने, चलचित्र निर्माणको चाप बढिरहेको छ । सिनेबजारमा एक हप्ता एउटा चलचित्रको लागि छुट्याइन्छ । र, प्रदर्शनको लागि प्रत्येक शुक्रबार पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
किन चलचित्र प्रदर्शनको शुरुवातको दिन शुक्रबार ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ, यसको लागि गुगलमा सर्च गर्दा ५० भन्दा कारणहरू फेला पर्दछन् । हलिउडमा फिल्म रिलिज हुन बारले छेक्दैन । तर बलिउडमा भने त्यो अनिवार्य गरिएको छ । भारतमा पहिलो क्लासिकल चलचित्र ‘मुगले आजम’ बन्योे । त्यो ५ अगष्ट १९६० मा रिलिज भएको थियो । त्यो शुक्रबार नै थियो । बलिउडले यसलाई पहिलो कारण मानेको छ । त्यसैगरी शनिबार र आइतबार विदा हुने भएकोले शुक्रबार रिजिल गर्दा सजिलो हुने भएको अर्को कारण भेटिन्छ । भारतीय सिको गर्दै नेपालमा पनि शुक्रबार फिल्म रिलिज गर्ने प्रथा बसेको स्वभाविकै हो ।
नेपालमा यो वर्ष एकै निर्देशकले एकै याममा दुई चलचित्र रिलिज गरे । ति भाग्यमानी निर्देशक हुन् –दिनेश लिङ्देन (दलप्रसाद) । उनीद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘शान्ति’ मंसिर १४ गते रिलिज भएको थियो भने ‘अदालत’ फागुन २४ गते । यसभन्दा अगाडि ‘द क्राइम’ र ‘काबेली’ प्रदर्शनमा ल्याएका लिङ्देनको चलचित्र ‘दुस्साहस’ प्रदर्शनको तयारीमा छ । त्यसैगरी चलचित्र ‘दीपकिरण’ पनि निर्माणकै क्रममा छ ।
यसरी ६ चलचित्र, ३ दर्जनजति म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरिसकेका दिनेश लिङ्देन कसरी यहाँसम्म आइपुगे र आगामी योजना बारे नयाँअनलाइनको कार्यालयमा लामो कुराकानी गरियो । लिङ्देनसँग अनेकौं दुःखकष्ट, तितापिरा भोगाईहरू रहेछन् । ति भोगाईहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजनीतिक परिवारमा जन्म र बाल्यकाल
वि.सं. २०३४ फागुन २९ गते पाँचथरको साविक थर्पु २ मा आमा हरिमाया थेबे र बुबा स्व. नरप्रसाद लिङ्देनबाट माइला छोराको रूपमा जन्मिएका हुन् दिनेश लिङ्देन । बुबा व्रिटिस आर्मीमा थिए । तर पहिलो छुट्टीमा नेपाल आएपछि पुनः पल्टन् गएनन् । जमानामा आइएस्सी पढेपछि क्लार्कमा भर्ति भएका रहेछन् नरप्रसाद । अलि पढेपछि भर्ति भिड्दा गाउँघरमा ‘कलरक’मा गयो भन्ने गर्दथे । त्यो आर्मीभित्रको प्रशासन फाँट हेर्ने पद हो ।
सामान्य राजनीति गर्न थालिसकेका नरप्रसादले ‘मलाया लाहुरे’ भइरहन मन परेन । बरु नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा लागिरहे । पाँचथर जिल्लाको सभापति तथा तीनपटकसम्म महासमिति सदस्य बनेका थिए ।
बाल्यकालमा इमानदारी तथा अत्यन्तै सोझो रहेका दिनेश केही जिज्ञासु भने थिए नै । कुनै पनि विषयलाई लिएर अलि बढि नै सोच्ने गर्दथे – जस्तै; प्लेन कसरी उड्छ ? भनर एकोहोरिन्थे ।
त्यो सोचाईले उनमा अध्ययनशिलता बढायो । जसले वक्तृत्व कला र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले । सिर्जनशीलताले उनलाई भित्रैदेखि गाँज्यो । र, नाच्ने गाउने, नाटकमा अभिनय गर्ने आदि गर्न थाले । जसबाट कापीकलम पुरस्कार पाउने गर्दथे । कक्षाभरमा पुरस्कार पाइरहँदा गर्व पनि लाग्थ्यो रे ।
एसएलसीपश्चात जागिर र काठमाडौंको दुःख
दिनेशले एसएसली वि.सं. २०५३ सालमा गरे । एसएसलीपश्चात गाउँकै हुलाक कार्यालयमा खरिदारको जागिर पनि खाए । तर त्यो जागिरमा लामो झुण्डिरहन मन परेन । उच्च शिक्षा पढौं र सानैदेखि मनमा पालेको गायन तथा कलाकारिता तर्फ जम्ने अभिलाषाले काठमाडौं हान्निए ।
काठमाडौंको बस्दा पाएका दुःख भनिसाध्य र लेखिसाध्य रहेनछ । एकै कोठामा बस्ने साथीबीच एकै जुत्ता पालैपालो लगाएर कलेज जानुका साथै कैयौं भोकप्यासको सामना गर्नुपरेका रहेछन् । ति कुराहरू यहाँ भन्नुभन्दा कुनै दिन संस्मरण लेख्ने या पुस्तक नै तयार पार्नेसम्म योजना रहेछन् दिनेशको ।
हिजोआजका कुरामा झुल्किदा
सन्तोष पन्तद्वारा निर्देशित टेलिसिरियल ‘हिजोआजका कुरा’ धेरैभन्दा धेरै कलाकारको पहिलो पाइलाको रूपमा लिइन्छ । धारावाहिक तथा दैनिक घट्ने घट्नालाई लिएर बनाइने भएकोले निश्चित बाहेक अन्य धेरै कलाकारहरू झुल्किरहन पाउँथे । दिनेश त्यहाँ पुग्न सके, आफ्नो कुरा राख्न सके र १० एपिसोडसम्म अभिनय पनि गर्न पाएका रहेछन् ।
अभिनयगरेवापत पारिश्रामिक त मिल्दैनथ्यो । तर अभिनय गरेपश्चात मासुच्यूरा चाही अनिवार्य पाउने गर्दथे रे । घरमा रेडियो र टेलिभिजन मात्र मनोरञ्जनका साधन भएकाले धेरैभन्दा धेरैले उक्त सिरियल हेर्ने गर्दथे । त्यसैले सानो भूमिका गर्नेलाई समेत दर्शकहरूले चिन्ने गर्दथे । दिनेशलाई पनि केही दर्शकहरूले चिनेर फोन नम्बर खोजीवरी कल गरेको स्मरण पनि गर्छन् ।
गायक तथा संगीतकार दिनेश
दिनेश लिङ्देनको लगाव कलाकारिता कम, गायनतर्फ बढि थियो । त्यसैले प्रकाश गुरुङसँग संगीत सिकेका पनि थिए । त्यसैले वि.सं. २०५७ साल सिन्धु मल्लसँग चाइना गेटैमा र माण्डवी त्रिपाठीसँग ‘पाउजु कल्लीमा’ एल्बम निकालेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनी चलचित्र निर्देशनतर्फ लागे त्यसपछि भने गायन ठप्पै भयो । यद्यपि उनले आफ्नो चलचित्र दुस्साहस र अदालतमा आइटम गीत गाएका छन् । चलचित्र काबेलीमा संगीत पनि दिएका छन् । अदालतमा गाएको ‘लोकलभन्दा निगारै मिठो…’ गीत निकै चर्चित बनेको छ ।
सहायक निर्देशक भएपछि
पहिलोचोटी अभिनय गरेको ‘हिजोआजको कुरा’देखि चलचित्रमा आइपर्ने ससाना कामहरू दिनेशले गर्न थालेका थिए । उनी नलुकाई भन्छन् –‘स्पटव्वाईदेखि मैले काम गर्दै आएको हुँ ।’
चलचित्र माया बसेछ, धड्कन, लेखान्तलगायत कैयौं चलचत्रिमा सहायक निर्देशन गरेका उनले भारतीय चलचित्रमा पनि काम गरेका रहेछन् । निर्देशक जेडी चक्रावतीसँग भारतीय चलचित्रमा काम गर्नुपर्दा निकै नै सिक्न पुगेको दिनेशले बताए ।
वीरेन्द्र जोहारी र कोमल ओलीको गीत, आफ्नै स्वरका गीत गरी करिब ३ दर्जन म्युजिक भिडियोको निर्देशन पनि गरेका छन् । त्यसैगरी निर्देशक नरेश पौड्यालको ‘दीपशिखा’ चलचित्र मुख्य सहायक निर्देशन गरेपछि सोलो निर्देशक नै भएर आए चलचित्र ‘द क्राइम’मा । द क्राइम केही हलहरूमा लाग्यो । द क्राइमपश्चात ‘काबेली’ बनाए । ताप्लेजुङको पाथीभरा फेदीहुँदै बग्ने काबेली नदिआसपासमा बस्ने जनजीवनलाई आधार बनाएर निर्माण भएको चलचित्रले बेग्लै छाप छोडेको छ ।
म्युजिक अवार्ड पनि
उनको कम्पनी फाल्गुनन्द फिल्म्स्ले बर्सेनी ‘एफएलएफ अवार्ड’ कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमले लिम्बू फिल्म, संगीत, म्युजिक भिडियोलगायतको अवार्ड कार्यक्रम गर्ने गर्दछ । हरेक कुरा इतिहासको लागि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका दिनेशको यस कार्यक्रमले बेग्लै छाप छोड्न सकेको छ । निकट भविष्यमा नै लिम्बू चलचित्र बनाउने तयारीमा रहेका दिनेशले आफ्नो समुदायप्रति केही उत्तरदायी रहनै पर्छ भन्ने जोड रहेछ ।
नेपाली चलचित्रमाथि दिनेशको विश्लेषण
चलचित्र ठूलो लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले निर्माताले ढुक्कका साथ लगानी गर्नुपर्ने दिनेशको विश्लेषण छ । ‘वन्जि जम्प’ गर्दा पनि चिकित्सकले शारीरिक चेकजाँच गरेरमात्र वन्जीमा चढाउने उदाहरण दिँदै निर्माताहरूले नाफाभन्दा पनि लगानी उठोस्, राम्रो बनोस् भन्ने हेक्का राख्ने गर्दछन् । जसले गर्दा चलचित्र निर्माण भइरहेका हुन् ।
केही राम्रा निर्देशकले राम्रो चलचित्र ल्याइसकेपछि लामो ग्याप रहनुमा उनकोे बेग्लै तर्क रहेछ । उनको तर्क थियो –‘यस काममा होमिएपछि कहिले सगरमाथा पनि चढ्नुपर्छ र कहिले केचनामा पनि झर्नुपर्छ । सँधै सगरमाथामा मात्र बसिरहन्छु भन्दा लामो ग्याप रहन्छ ।’
पछिल्ला दिनमा बनेका चलचित्रहरूमा नेपालीपन हराउँदै गएको पनि उनले बताए । ‘बरु पहिले बनेका चलचित्रमा नेपालीपन थियो ।’ उनले थपे । सांस्कृतिक/सामाजिक रूपमा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यही भएर चलचित्रमा नेपालीपन हराउँदै गरेको उनको विचार रहेछ । अवार्ड जित्नको लागि पनि नेपाली पन हुनै उनको जिकिर थियो । व्यावहार, विचार र तनमन आदि नेपालीपनका विशेषण रहेको उनले प्रष्ट्याए ।
दिनेशको राजनीतिक पाटो
बुबा नरप्रसाद लिङ्देन नेपाली काँग्रेसमा जीवनभर काम गरे । ठीक त्यसको विपरित दिनेश चाही समाजवादी बाटो अपनाए । यसको कारण स्कुलमा रहँदा अग्रज दाईहरू तथा गुरुहरूले दिएको ज्ञान प्रशिक्षण रहेछ । माध्यमिक तह अध्ययनमै उनले कार्ल माक्र्सको ‘पुँजी’ पढ्न भ्याइसकेका रहेछन् । वि.सं. २०४५ सालमै अनेरास्ववियूको सदस्यता लिएर विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएका दिनेशले भूमिगत शैलीमा ‘कावेली खोला घुमेर गइगयो, चेली र माइतीको विछोडै भइगयो’ जस्ता गीत गाउँदै हिडेका रहेछन् ।
सानैदेखिको स्वभाव अन्याय भएको खण्डमा मन र मार्न तयार हुने खालको थियो । त्यस्तो व्यक्ति कम्युनिष्ट नै हुने ठहर पनि छ दिनेशको । काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहँदा पनि भूमिगत रूपमा माओवादीको सम्पर्क रहेको, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्यसम्म बनेका रहेछन् ।
साथै कलाकारितासँग नजिक रहन चाहेकोले जनसांस्कृतिक मञ्चको केन्द्रीय सदस्य, चलचित्र व्यूरो सचिवालय सदस्य रहेर काम गरिसकेका छन् । फरक विचार र पार्टीसँग रहने बुबासँग बेलाबेलामा बहस पनि हुन्थ्यो रे । तर विचारको जीतका कारण बुबाको प्रभावमा परिनँ, दिनेश भन्छन् ।
श्रीमती कुशल निमात्री
श्रीमती र छोराछोरीसहित ४ जना परिवार छ दिनेशको । श्रीमती कविता राई लिङ्देन दिनेशले बनाउने आधिकांस चलचित्रको निमात्री बनेकी छिन् । दिनेशका अनुसार श्रीमतीमा म्यानेजमेन्ट पक्ष राम्रो छ । त्यसैले काम गर्न सजिलो पनि छ ।
काठमाडौंमा हार खाएर गाउँ फर्केर विवाह गरेपछि श्रीमतीकै आँट र सहयोग गर्ने बचन लिएर काठमाडौं आएको सहर्ष बताउँछन् ।
काठमाडौ बसिञ्जेल चलचित्र, गाउँ गए राजनीति
सुदुर भविष्यसम्म चलचित्रक्षेत्रसँगै रहिरहने योजना छ दिनेशको । सम्भव भए चलचित्र निर्देशक समाजको नेतृत्व गर्ने सपना पनि छ । त्यसको साथै लिम्बुवान राष्ट्रिय चलचित्रकर्मी संघको महासचिव, प्रगतिशील चलचित्र मञ्चको अध्यक्ष पनि छन् ।
चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले यो व्यवसाय ठान्छन् । व्यवसायको लागि काठमाडौं बस्नुपरेको उनी निर्धक्क बताउँछन् । काठमाडौं छोड्नुपरेको दिन राजनीतिक विचारलाई बोकेर निस्कने बताए । किनभने विचार सँधै आफूसँग रहने तर व्यवसाय निश्चित ठाउँमा रहने उनको ठम्याई रहेछ ।
देवेन्द्र सुर्केली एकै वर्षको एकै याममा एकै निर्देशकको दुई चलचित्र विरलै प्रदर्शनमा आउँछन् ।...
दर्शकहरूले ज्याकी च्यानजस्तै भनिदिँदा गर्व लाग्यो –रुद्र पाहिम
काठमाडौं, २८ फागुन । अहिले नेपाली चलचित्र बजारमा अदालतले तताएको छ । फाल्गुनन्द फिल्म्स्...
सुखको दिन पर्खेकी टुकुमायालाई परेको बज्रपात
देवेन्द्र सुर्केली काठमाडौं, २२ फागुन । पुस ३ गतेको दिन । धादिङको साविक सलाङ...
लिम्बु सँस्कृतिको हब बन्दै बेलायतको आसफोर्ड
अमित याक्थुङ्बा आसफोर्ड(बेलायत)/करबि डेढ लाख नेपालीहरूको बसोबास रहेको बेलायतमा लिम्बु समुदाय चौथो जनसंख्याका रूपमा...